သိန္း 300 မွ သိန္း 600 ထိ သံလျင်မြို့နယ်ရှိရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေများ
သန်လျင်မြို့နယ် အောင်ချမ်းသာ(၂)ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ၂၀ x ၆၀ ဂရမ်မြေ နှင့် လုံးချင်းတိုက် အရောင်း...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9963292 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9944570 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. ပိတ္ရန္
City Loft ရဲ့ Studio Type အခန်းလေး ရောင်းမည်
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9878746 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက် တိုးချဲ့ ၂ ၄၀x၆၀ ‌မြေကွက် (သိန်း ၄၀ သွင်း)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9874532 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက် မိန်းလမ်းမပေါ် နစ်ထပ်တိုက် ရောင်းမည်.
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9859784 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
သန်လျင်မြို့၊ အောင်ချမ်းသာမှတ်တိုင်အနီးမှ လုံးချင်းအိမ်နှင့်ခြံရောင်းမည်
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9859337 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
Shwe Thazin Real Estate ပိတ္ရန္
City Loft (Star City) မှ July 2022 တွင် အခန်းအပ်မည့် studio ခန်းတစ်ခန်းရောင်းရန်ရှိ (Owner direct)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9857466 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9855357 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
သန်လျင် အေးမေတ္တာရပ်ကွက် စျေးတန် မြေကွက်(အရောင်း)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9846801 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
09-5041674, 01-8393173, 01-8394415,095041674,018393173,018394415
သန်လျင်မြို့၊ အောင်ချမ်းသာ(၂)ရပ်ကွက်ရှိ ခြံနှင့်လုံးချင်းတိုက်ရောင်းရန်ရှိသည်
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9832628 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္